လိုအပ်ပါသော ဥပဒေ၊နည်းဥပဒေပြဌာန်းမှုများနှင့် နိုင်ငံတော် - Yangon Nation News
လိုအပ်ပါသော ဥပဒေ၊နည်းဥပဒေပြဌာန်းမှုများနှင့် နိုင်ငံတော်
ဆောင်းပါး၏ အစတွင် မိမိရေးသား တင်ပြခြင်မူကို ပထမဦးစွာ တင်ပြပါရစေ၊
ယခု fb ၌နေပြည်တော် တွင် နိုင်ငံရေးရာထူးတာဝန်ထမ်းဆောင်နေသူများ၊ ဝန်ထမ်းအကြီးအမှူးများအား
မြေပေးမည့် ကိစ္စများကိုရေးသားနေကြသူများမှာ ယဉ်ကျေးပြီး အချက်အလက်ဖြင့်ထောက်ပြကြသူများမှ အချို့သည်
ရိုင်းပြစွာဖြင့် ရေးသားနေကြသူများကို တွေ့နေရပါတယ်၊
တစ်ချို့နိုင်ငံရေးပါတီတို့မှ ဗဟိုအလုပ်အမှူဆောင် နေရာယူထားကြသူများလည်းပါနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်၊
အများပြည်သူကို နည်းပေးလမ်းပြ ထိန်းကွပ်ပါမည်၊
စသည်တို့ကိုလုပ်ပေးနိုင်ကြမည်ဟုလည်း မိမိတို့ပြည်သူအများက ထင်မှတ်ထားကြပါတယ်။
လိမ္မာယဉ်ကျေး၊ပျူငှာကာ လူကြီးလူကောင်းဆန်ကြလိမ့်မည်ဟူ၍လည်းမျှော်လင့် ထင်မှတ်ရပါတယ်။
မြန်မာကျပ်ငွေ သုံးသိန်း နိုင်ငံတော်ကိုဆောင်ကာ တည်ထောင်လိုသူ (၁၅) ယောက်ရှိယုံမျှ ဖြင့် နိုင်ငံရေးပါတီ တစ်ခုခြင်းကိုလည်း ရုံးနေရာများရှိခြင်း၊မရှိခြင်း၊ အမှန်တကယ်ပါတီဝင်အင်အာား (၁၀၀၀) ရှိခြင်း၊မရှိခြင်းကိုလည်းတိတိပပ မလေ့လာပါဘဲ မိမိတို့ ပြည်သူများက အလေးထားလျှက်ရှိနေကြပါတယ်။
အထူးသဖြင့် နိုင်ငံရေးပါတီဆိုတာ အစိုးရကို ထောက်ပြဝေဘန်တဲ့အခါမှာ အချက်အလက် အမှန်များနဲ့သာ ထောက်ပြဝေဘန် ကြရမှာမဟုတ်ပေဘူးလား ?
ကြရမှာကလည်း နိုင်ငံရေးပါတီများ၏ အလုပ်မဟုတ်ပါလား?
နည်းနည်းလေးအသံကြားလိုက်တာနဲ့ မဆဲရုံတစ်မယ် ကြမ်းတမ်း နိမ့်ပါးသည့် အသုံးအနှုန်းများဖြင့် fb တွင် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကိုထိပါးပုတ်ခတ်ပြီး တက်ရေးလိုက်ဲတာကလည်းနိုင်ငံရေး အတိုက်အခံရယ်လို့ ထင်နေကြတာကိုလည်းတွေ့ နေ ဖတ်နေကြရပါတယ်။
အစိုးရကိုမှားနေတယ်လို့ထင်ပါရင် မိမိနိုင်ငံနဲ့ မိမိပြည်သူ များအတွက် နည်းလမ်းကောင်းတွေကို ညွှန်းဆိုကာ ရဲရဲတင်းတင်း ယဉ်ကျေးပျူငှာစွာဖြင့် ပြောဆိုရေးသားကြရမှာက မိမိတို့၏ ကောင်းမွန်သောအလုပ်ဟုသတ်မှတ်ထားကြစေလိုပါတယ်။
ဤမှာ မိမိကိုယ်တိုင်ကကော ယခင်အုပ်စု၊ယခုအုပ်စု စသည်ဖြင့် ကင်းကင်းရှင်းရှင်းနဲ့ သန့်စင်မူကော ရှိပါရဲ့လား ?
ဘြော် ငါကိုယ်တိုင်ကလည်း အခွင့်အလန်းအမှီကြီးနဲ့ပါလားဆိုတာ ဟုတ်မဟုတ် သေသေချာချာ စမ်းစစ်ကြဘို့လိုလာပါလိမ့်မယ်။
ဒါပေမယ်လို့လည်း အမှီက သန့်ရှင်းပြီး အရိပ်လက္ခဏာ ကာင်းဘို့တော့လိုပါတယ်။
နေပြည်တော်မှ အိမ်မြေ ကိစ္စကို မရေးခင်…
(၁၉၆၂) ကတော်လှန်ရေးကောင်စီက ပြဌာန်းလိုက်တဲ့ ဥပဒေတစ်ခုကို ဖော်ပြပါရစေ။
၁၉၆၂ ခုနှစ်သမိုင်းဝင်ပုဂ္ဂိုလ်များ၏ အထိမ်းအမှတ်မော်ကွန်းဥပဒေ။
(၁၉၆၂)ခုနှစ် ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံေ တော်တာ်လှန်ရေးကောင်စီ၏ ဥပဒေအမှတ်(၄)…..
၁… (၁) ဤဥပဒေကို (၁၉၆၂) ခုနှစ် သမိုင်းဝင် ပုဂ္ဂိုလ်များ၏ အထိမ်းအမှတ် မော်ကွန်း
(၂) ဤဥပဒေသည် ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ တော်လှန်ရေးအစိုးရက အမိန့်၊ကြော်ငြာ
စာဖြင့် သတ်မှတ်သည့် နေ့ ရက်တွင် စတင် အာဏာတည်ရမည်။
၂ ။ ။ဤဥပဒေတွင် အကြောင်းအရာနှင့်ဖြစ်စေ၊ ရှေ့နောက် စကားတို့၏ အဓိပ္ပါယ်နှင့်ဖြစ်စေ ၊ မဆန့်ကျင်လျှင်……….
(က) သမိုင်းဝင်ပုဂ္ဂိုလ် ဆိုသည်မှာ မြန်မာနိုင်ငံသမိုင်းတွင် ထင်ရှားကျော်စော၍ နိုင်ငံအတွက်သော်လည်းကောင်း၊ အမျိုး ၊ဘာသာ၊သာသနာ၊ စာပေအတွက်သော်လည်းကောင်း၊ အကျိုးပြု ဆောင်ရွက် သော မျိုးချစ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဆိုလိုသည်။
(ခ) အထိမ်းအမှတ်မော်ကွန်း ဆိုသည်မှာ အများပြည်သူတို့နှင့် သက်ဆိုင်သည့် နေရာ ၊ဌာန များတွင် သမိုင်းဝင်ပုဂ္ဂိုလ်၏ အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် တည်ဆောက်ထားသော အဆောက်အဦ၊ ကြေးရုပ်၊ကျောက်တိုင်၊ သို့တည်းမဟုတ် ပန်းခြံကိုဆိုလိုသည်။
(ဂ) ယဉ်ကျေးမူကောင်စီ ဖွဲ အသိအမှတ်ပြုခြင်း နဲ့…
၃ ။ ။(၁) ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတဝှန်းလုံးတွင်အများပြည်သူတို့နှင့်သက်ဆိုင်သော
သမိုင်းဝင် ပုဂ္ဂိုလ် များ၏ အထိမ်းအမှတ် မော်ကွန်းကိုတည်ဆောက်ရန်၎င်း၊ ထိုအထိမ်းအမှတ်မော်ကွန်းကို ခံ့ညားထည်ဝါစွာ မွမ်းမံရန်၎င်း၊ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရန်၎င်း၊ကြီးကြပ်ရန်၎င်း၊တာဝန်ပေးနိုင်သည့်အာဏာသည်
ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ တော်လှန်ရေးအစိုးရ၌သာလျှင် တည်ရှိရမည်။
(၂) ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်လှန်ရေးအစိုးရသည် အများပြည်သူတို့အကျိုးငှာ၊
သမိုင်းဝင်ပုဂ္ဂိုလ်များ၏ အထိန်းအမှတ်၊မော်ကွန်းကို အခါအားလျော်စွာတည်ဆောက်နိုင်သည်။
(၆/က) ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်တော်လှန်ရေးအစိုးရက မည်သည်ံါခါမဆို ပယ်ဖျက်နိုင်သည်၊ ထို့ပြင်…
(ခ) မပယ်ဖျက်သေးလျှင် ယင်းသို့မပယ်ဖျက်သေးသမျှ ကာလပတ်လုံး ၊အဆိုပါအမိန့်ကြောငြာ စာမှာ ၎င်းတွင်သီး ခြားဖော်ပြထားသော သမိုင်းဝင်ပုဂ္ဂိုလ်များ၏ အထိမ်းအမှတ် မော်ကွန်းဖြစ်ကြောင်း သို့တည်မဟုတ် ဒေသန္တရ အာဏာပိုင် သည် ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့ဖြစ်ကြောင်း ခိုင်လုံသောသက်သေအထောက်အထားဖြစ်ရမည်။
၄။ ။ (၁) မည်သူမဆို ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်လှန်ရေးအစိုးရ ၏ခွင့်ပြုချက်မရရှိဘဲ သမိုင်းဝင်ပုဂ္ဂိုလ်၏ အထိမ်းအမှတ် မော်ကွန်း တည်ဆောက်ခြင်းမပြုရ၊ သို့တည်းမဟုတ် တည်ဆောက်ခြင်းမပြုစေရ။
(၅) ။ ၆/၁) (၆/၂)က..ခ…ဂ…စ) (၆/၃)
ထိုဥပဒေအရ ယဉ်ကျေးမူကောင်စီဖွဲ့ ပြီး
တည်ဆောက်ပြုပြင်မှုကို ယဉ်ကျေးမူကောင်စီ၏ ငွေကြေးသုံးစွဲပိုင်ခွင့်ကိုပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။
အကယ်၍များ ဤကဲ့သို့သော ဥပဒေ အား
ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေပုဒ်မ (၉၈)ပေးထားချက်အရ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှ ဥပဒေပြဌာန်းပေးပြီး ပုဒ်မ (၈၆)/(က)/(ခ) ဖြင့်မဲခွဲဆုံး ဖြတ်ပေးကာ…
သာသနာရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမူ ဝန်ကြီးဌာနမှ နည်းဥပဒေ၊စည်းမျဉ်းနှင့် စည်းကမ်းထုတ်ပြန်ခွင့်၊သက်ဆိုင်သည့် အမိန့်၊ကြော်ငြာစာ၊
အမိန့်ညွှန်ကြားချက်နှင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်များကို ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုဒ်မ (၉၇)/(၁)/(၂) အရ ဆောင်ရွက်ကြမယ်ဆိုပါက……
ဗိုလ်ချုပ်ကြေးရုပ်နဲ့အတူ သက်ဆိုင်ရာဒေသများ၏ မျိုးနွယ်စု ခေါင်းဆောင်များ(နိုင်ငံရေး၊စာပေ၊ယဉ်ကျေးမူ) ခေါင်းဆောင်များ၏ ကြေးရုပ်များကိုပါ သက်ဆိုင်ရာပြည်နယ်အလိုက် ဗိုလ်ချုပ်ရုပ်ထုနဲ့အတူတည်ဆောက်ခွင့်ကို ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့မှ…
မှအမှူးပြုသည့် ဒေသအစိုးရများနဲ့ ဒေသခံမျိုးနွယ်စုများနှင့် ညှိနိူင်းလုပ်ဆောင်ကြမည်ဆိုပါက ဥပဒေအရဘဲဖြစ်စေ၊ နယ်မြေဒေသအလိုက်ဘဲဖြစ်စေ ကောင်းမွန် ကျေနပ် အေးချမ်းသာယာ ငြိမ်းချမ်းမူတစ်ခုဖြစ်စေမှာပါ။
ပုဒ်မ (၃၇) နိုင်ငံတော်သည်……
(က) နိုင်ငံတော်ရှိမြေအားလုံး ၊
မြေပေါ် မြေအောက်၊ရေပေါ် ရေအောက် နှင့် လေထုအတွင်းရှိ သယံဇာတပစ္စည်းအားလုံး၏ ပင်ရင်းပိုင်ရှင်ဖြစ်သည်။
(ဂ) နိုင်ငံသားများအားပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်ခွင့်၊အမွေဆက်ခံခွင့် ၊ကိုယ်ပိုင်လုပ်ကိုင်ခွင်ဲ၊တီထွင်ခွင့်နှင့်မူပိုင်ခွင်ဲတို့ကိုဥပဒေပြဌာန်းချက်နှင်ဲအညီ ခွင့်ပြုရမည်။
ပုဒ်မ (၂၁၅) နိုင်ငံတော်သမ္မတသည် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရ သော်လည်းကောင်း၊
ဥပဒေတစ်ရပ်ရပ် အရသော်လည်းကောင်း ၊
မိမိအားအပ်နှင်းထားသည့် တာဝန်နှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်များကို ကျင့်သုံးဆောင်ရွက်မူ သို့တည်းမဟုတ် ကျင့်သုံးဆောင်ရွက်သည့်အနေဖြင့်
ပြုခဲ့သော ပြုလုပ်မူအတွက် မည်သည့်လွှတ်တော် ၊မည်သည့်တရားရုံးတွင်မျှ ဖြေရှင်းရန် တာဝန်မရှိစေရ။ သို့ရာတွင် ဤကဲ့သို့ တာဝန်မရှိစေခြင်းသည် နိုင်ငံတော်သမ္မတအား
နှင့် စပ်လျဉ်းသည့် ပြဌာန်းချက်များနှင့်သက်ဆိုင်ခြင်းမရှိစေရ။
ပုဒ်မ(၂၁၈)/(ခ) နိုင်ငံတော်သမ္မတသည်မိမိ၏ သဘောအတိုင်းဆောင်ရွက်ရန် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေကပြဌာန်းထားသည့် ကိစ္စရပ်များမှအပ ပြည်ထောင်စုအစိုးရက ဆောင်ရွက်ခွင့်ရှိသော ကိစ္စရပ်များအတွက် လည်းကောင်း၊အဆိုပါကိစ္စရပ်များကို ပြည်ထောင်စုအစိုးရဝန်ကြီးများအားခွဲဝေ အပ်နှင်းရန်လည်းကောင်း၊ ဥပဒေတစ်ရပ်ရပ် အရဆောင်ရွက်ရန် တာဝန်ရှိ သော ပုဂ္ဂိုလ်အား ခွဲဝေအပ်နှင်းရန်လည်းကောင်း လိုအပ်သည့် နည်းဥပဒေများ ပြဌာန်းခွင့်ရှိသည်။
ပုဒ်မ(၅၀)/(က) နိုင်ငံတော်၏ မြို့တော်ဖြစ်သည့် နေပြည်တော်ကို နိုင်ငံတော်သမ္မတ၏ တိုက်ရိုက်အုပ်ချုပ်မူအောက်တွင်ထားရှိသည့် ပြည်ထောင်စုနယ်မြေအဖြစ်သတ်မှတ်သည်။
ပုဒ်မ(၃၀) … နိုင်ငံတော်သမ္မတသည် ပြည်ထောင်စု နယ်မြေ ဖြစ်သည့် နေပြည်တော်အတွင်းရှိ ခရိုင်နှင့် မြို့နယ်များကို လိုအပ်သလို ပြင်ဆင်သတ်မှတ်နိုင်သည်။
(ခ) မြေလွတ်၊မြေလပ်နှင့် မြေရိုင်း ဖော်ထုတ်ခြင်း၊
(ခ) ရွာမြေ၊မြို့မြေ စီမံခန့်ခွဲရေး။
သို့ဖြစ်ပါသောကြောင့် နေပြည်တော်တွင် အစိုးရ၏ စီမံခန့်ခွဲမူ ရှိသည့် မြေများတွင် လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာ ၊ သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးဌာနများ၏ ဥပဒေနှင့် အညီ အမိန့်၊ညွှန်ကြားချက်များ၊နည်းဥပဒေများဖြင့် ဆောင်ရွက်၍ ရနိုင်သည့် နည်းလမ်းများစွာရှိပါတယ် ။
သမ္မတကြီးနှင့် နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံ ဦးဆောင်သည့် နိုင်ငံရေးရာထူးတာဝန်ထမ်းဆောင်နေကြသော ရွေးချယ်ခံအစိုးရသည် မြေပိုင်ဆိုင်မူကို ဦးဆောင်ပြောဆိုပြီး ဆောင်ရွက်ခိုင်းမှာကတော့ မဖြစ်နိုင်လှပေ။
ယခင်အစိုးရလည်း တစ်ဦးခြင်းပိုင်မြေတွေရယူသွားကြတဲ့ ထုံးများရှိခဲ့ပါတယ်၊
ယခုလည်းအစိုးရစီမံခန့်ခွဲမူအောက်မှာရှိနေသောမြေများမှ တိုင်းပြည်အတွက် နိုင်ငံရေးတာဝန်ထမ်းဆောင်နေသူများသည်လည်း နိုင်ငံတော်မှ ဖော်ဆောင်ပေးရင်ရပါတယ်ဆိုသည့် အခြေအနေအား ဌာန အကြီးအမှူးများ၏ ဆိုရိုးများလည်းရှိကောင်းရှိနေနိုင်ပါတယ်၊
ဌာနအကြီးအမှူးများအတွက်လည်း မြေပိုင်ဆိုင်မူများကိုလည်းပေးထားတာတွေ့နေရခြင်ကြည့်ပြီး သုံးသပ်မိတာဖြစ်ပါတယ်။
နေပြည်တော်မြေယာ အိမ်မြေ ဖော်ဆောင်ရေး
ကော်မတီ ကိုဖွဲ့စည်း၍ သို့မဟုတ်နေပြည်တော်ကောင်စီသည်…..
နိုင်င်ငံတော်မှ ဘယ်အဆင့်မှ ဘယ်အဆင့်အထိ ်မြေအကျယ်ဘယ်လောက်၊နိုင်ငံတော်မှ သတ်မှတ်ဈေးကဘယ်လောက်
အထက်ပါ မှာရေးသားခဲ့သော ဥပဒေပြဌာန်းမူများကို အသုံးပြု၍…..
ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများကို အမိန့်၊ ညွှန်ကြားချက်များဖြင့်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါက ပိုမိုပြီး မကောင်းမွန်ပေဘူးလား၊
အကယ်၍ မြေမရှိလို့ မြေကွက်လိုခြင်သူက လျှောက်လွှွှာတင်ပြီး ၊ မြေရှိပါသောကြောင့် မလိုအပ်သောသူက မတင်ခြင်း၊
များပြုမူဆောင်ရွက်ပါက ပြည်သူ လူထု၏ အားကိုး ကြည်ဖြူမူများကို လိုလိုလားလား ဖြစ်လာစေမှာဖြစ်ပါတယ်။
သို့ဖြစ်ပါသောကြောင့် ယခုနေပြည်တော်မှ ဖြစ်စဉ်အား မှားနေနိုင်ခြင်းနဲ့ ပိုမိုကောင်းမွန်မည့် အခြေအနေများပေါ်ပေါက်လာစေရန်
သေချာချာ အချက်အလက်နှင့် မထောက်ပြပါဘဲ ငါ့စကား နွားရ လိုမျိုးရေးသားပြောဆို ခြင်းများအား တတ်နိုင်သမျှ
လျော့ချကြ ပြီကောင်းမွန်ထိရောက်သည့် အသုံးအနှုံးစကားရပ်များ အပြင် မိမိတို့ပါတီသာဆိုလျှင်…..
တိုင်းပြည်အတွက် ဘယ်လိုမျိုးတွေလုပ်ပြ ပါမယ ်ဆိုတဲ့ မူဝါဒများချ ပြပြောဆိုကြရင်မကောင်းပေဘူးလား ?
ရုန့်ရင်း ကြမ်းတမ်း အပုတ်ချ ပြောဆိုမူများသည်…..
အများပြည်သူနဲ့တကွ မိမိနှင့် မိမိပါတီ အဖွဲ့အစည်း အသိုင်းအဝိုင်းအတွက်လည်း
မိမိနဲ့ မိမိအဖွဲ့အစည်း၊ မိမိ၏ပါတီမှာ
မိမိတို့နိုင်ငံကို အစစအရာ ကောင်းမွန်တိုးတက်လာစေဖို့…..
ယဉ်ကျေး ပျူငှာ ၊
ဝေဖန် သုံးသပ် ၊
လူပ် ခတ်မူများ ၊
ရှေ့လက် ချီတက် ၊
လူ့အခွင့်အရေးကောင်စီ၏ ပုံမှန်အစည်းအဝေးတွင် အီးယူမှ တင်သွင်းသည့် ဆုံးဖြတ်ချက်အဆိုမူကြမ်းအား မြန်မာနိုင်ငံက ပယ်ချ